Nkwupụta: 68% nke ndị isi na enweghị ụlọ ọrụ mgbasa ozi mmekọrịta | Martech Zone
Ndị isi ụlọ ọrụ Fortune 500 na-ekwu na mgbasa ozi mmekọrịta na-enyere aka ịkpụzi ọdịdị ụlọ ọrụ ahụ, na-ewulite mmekọrịta na ndị ọrụ na mgbasa ozi ma na-enye ụlọ ọrụ mmadụ ihu mmadụ. Ọ bụ ihe ijuanya na a akụkọ ọhụrụ site n'aka CEO.com na DOMO achọpụtala na 68% nke ndị isi ọ nweghị mgbasa ozi mmekọrịta ọ bụla!
Mgbe m na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, nnukwu nsogbu anyị nwere bụ iji kọọrọ ndị ọrụ ụlọ ọrụ, ebumnuche na ọdịbendị sitere n'aka onye isi ala site na njikwa na ndị ọrụ ọ bụla. Ọtụtụ ndị isi ụlọ ọrụ nwere atumatu uzo, ma ọ dịghị onye ọrụ ọ bụla nwere obi ike gabiga onye isi njikwa na ihe egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ịgafe n'ọnụ ụzọ ahụ. Yabụ, ụfọdụ ndị isi ga - akpọta Walkabout - oge edebere iji gafee ụlọ ọrụ ma gwa ndị ọrụ okwu n'onwe gị.
Ihe omume ndị a na-emeghe anya anyị maka ndu anyị n'agbanyeghị. Obere oge na-agwa m okwu na ọrụ ga-a na-emeghe ọnụ ụzọ ámá maka ndozi na ụlọ ọrụ usoro, ọdịbendị, ma ọ bụ nanị àgwà ha dị ka a dum.
Echere m na ọ bụ ihe na-ewute n'ezie na ndị isi anaghị ebute na mgbasa ozi mmekọrịta maka ihe ndị a. Ndị isi ụlọ ọrụ nwere ike ịkekọrịta, soro ma kwukọrịta okwu n'ofe njikwa ma nweta nkọwa doro anya nke ụlọ ọrụ ha na-azaghachi nduzi ha ma ọ bụ nduzi ha. Ndakpọ olileanya agaghị enwe ike ịka njọ ma tolite ma ọ bụrụ na achọpụta ya n'oge. Nke a nwere ike ibute ezigbo afọ ojuju ndị ọrụ - nke na - eduga na afọ ojuju ndị ahịa.
Ọ bụrụ n ’ị bụ onye isi adighi na mgbasa ozi mmekọrịta - mee ka ha gaa budata 2014 Social CEO Report ma kpoo aka ha n’ebe ahu. Ha ga-ekele gị maka ya ma emechaa… ma eleghị anya na Twitter.
Tags: CEOceo.comcnn egodomoFacebookgoogle +instagramLinkedInelekọta mmadụ ceoelekọta mmadụ mediaTwitter